Wasiir Omaar oo Ka hadlay baaqashada Safarkiisii Kismaayo | Goobsan Media Inc.
Home Somali News Wasiir Omaar oo Ka hadlay baaqashada Safarkiisii Kismaayo
Wasiir Omaar oo Ka hadlay baaqashada Safarkiisii Kismaayo
“Safarkii aan kismaayo ku aadi lahaa anigaa ka baaqday anigoo ka fogaanaya in si un iska horimaad u dhaco. Qof isku dayay inuu isoo qaado ma jiro. In kastoo aan xaq u leeyahay in la i ilaasho haddana kismaayo markaan tagayo ciidda ayaa i ilaalin (ilaah ka sokow) ayuu yiri wasiir Oomaar”.
“Hooyadii canuggeda lala qabsaday ee la yiri aan idiin kala goyno waxey tiri ha loo daayo tii aanan dhalin iyadoo ka baqaysa in canugeeda la kala gooyo. Taas un baan isku mid nahay ee awood aan Jubbaland ku imaado ma weyn. Waan aqaan masuuliyadda i saaran ayuu hadalkiisa sii raaciyay Wasiir Oomaar”.
Todobaad ka hor ayaa Maamulka Jubbaland waxaa uu sheegay in uu hakiyay xiriirka dowladda Federaalka sidoo kale uu joojiyay inay deegaannada Jubbaland tagaan mas’uuliyiin xilka haaya dowladda Federaalka Soomaaliya